China HuoXiangZheng Qi Wan mpanamboatra sy mpamatsy | HEX
Manohana ny fahasalaman'ny rafi-kery sy ny gastrointestinal system. Manampy amin'ny fanalefahana ny fahafenoan'ny kibo.
Patchouli, ravina Perilla, Angelica dahurica, Atractylodes macrocephala (endasina), hoditr'i Tangerine, Pinellia (vita), Magnolia (vita amin'ny sakamalao), Poria, Platycodon, licorice, vavony vilany, jujube, sakamalao.
Fitaovana: Tsy misy
Ity vokatra ity dia pilina mavesatra volontsôkôlà; manitra, mamy ary mangidy kely.
1. Ny sakafo tokony ho maivana.
2. Tsy tsara ny mihinana fanafody sinoa tompony mandritra ny fotoana anaovana fanafody.
3. Ireo marary manana aretina mitaiza mafy toy ny tosidra ambony, aretim-po, aretin'aty, diabeta, aretin'ny voa, vehivavy bevohoka na marary manaraka fitsaboana hafa dia tokony handray izany eo ambany fitarihan'ny mpitsabo.
4. Telo andro aorian'ny fihinanana fanafody dia tsy mihatsara ny soritr'aretina, na miharihary ny mandoa sy ny fivalanana, ary misy soritr'aretina lehibe hafa tokony ho any amin'ny hopitaly.
5. Raiso araka ny fampiasana sy fatra. Ny ankizy sy ny antitra izay malemy ara-batana dia tokony handray izany eo ambany fitarihan'ny dokotera.
6. Manontania dokotera raha hampiasaina maharitra.
7. Ny olona tsy mahazaka an'ity vokatra ity dia tsy tokony hitandrina azy io.
8. Fady ny mampiasa an'io vokatra io rehefa miova ny fananany.
9. Ny ankizy dia tsy maintsy ampiasaina eo ambany fanaraha-mason'ny olon-dehibe.
10. Azafady mba tsy ho azon'ny ankizy azafady ity vokatra ity.
Previous: Liu Wei Di Huang Wan
Manaraka: Gan Mao Ling (Takelaka vita amin'ny sarimihetsika)
Vovon-tsitroka White Willow
Gan Mao Ling (Takelaka vita amin'ny sarimihetsika)